महिनावारी गडबढ हुने समस्या छ ? त्यसाे हाे भने मुक्ति पाउन घरमै पाईने खानेकुरा खानुहोस् - HelloKhabar
महिनावारी गडबढ हुने समस्या छ ? त्यसाे हाे भने मुक्ति पाउन घरमै पाईने खानेकुरा खानुहोस्
८ जंक फुडहरुबाट टाढै रहनुहोस् मासिक धर्मको बेला आफ्नो खाने व्यवहारमा पनि ध्यान राख्नुहोस् । जति सक्नुहुन्छ जंक फुड नखानुहोस् र रक्सीबाट टाढै रहनुहोस् । ९ तातो पानीले नुहाउनुहोस्ः तातो पानीले नुहाउनाले रक्त प्रवाह राम्रो गरेर पीडा कम हुने गर्दछ ।